War-saxaafadeed; Kasoo Baxay Wasaarada Arimaha Dibada Jsl Iyo Nuxurka Uu Xanbaarsan Yahay!. | WAJAALE NEWS
War-saxaafadeed; Kasoo Baxay Wasaarada Arimaha Dibada Jsl Iyo Nuxurka Uu Xanbaarsan Yahay!.
Afhayeenka Wasaarada Arimaha Dibada Jsl Oo Jawaab Adag ka Bixisay Eedo Musuq maasuq Oo Lala Xidhiidhiyay Wasiirka Wasaarada, Kana Warbixiyay Waxyaabaha Uqabsoomay.
Waxaa Ayaamahan dambe ku jiray saxaafadda iyo baraha bulshada eedo la xidhiidha musuqmaasuq oo ka dhashay baadhitaan guddida xisaabaadka ee baarlamanku sameeyeen si dadbana loo soo geliyey wasaaradda arrimaha dibedda iyo wasiirka. Hadaba waxaan doonayaa in aan halkan ka cadayno in haba yaraatee aan lagu takrifalin lana leexsan hantida wasaaradda, taas oo loo adeegsado wixii loogu tala galay oo keliya. Wasiirku wuxuu ka qaataa wasaaradda mushahar iyo sahay safar oo keliya. Isaga oo og awoodeena dhaqaale una tudhaaya qaranka kama qaato waxii uu wasiir ahaan xaq ugu lahaa. Tusaale markuu safar u baxayo ma iibsado tigidhka kuraasta madaxda (business class) ee qaaliga ah. Waxa uu door biday inuu ku safro tigidhka jaban ee dadweynaha (economu class). Xaq waxa wasiirka loogu leeyahay 7 saacadood oo shaqo ah maalintii (7:00am – 2:00pm), lix casho todobaadkii, hase ahaatee waxa uu ugu deeqaa qaranka 7 saacadood oo kale maalin walba iyo maal maha jimceyaasha iyo fasaxyada oo uu shaqeeyo.
Shaqaalaha wasaaraddu gudo iyo dibedba waxay aad ugu dadaalaan oo xil weyn iska saaraan hawsha qaranku u igmaday. Maanta maalin aynu ka wakiilo badanahay oo ka saaxiibo badanahay, oo ka dhadhaqaaq badanahay ma jirto. Shaqaalaha wasaaradduna madax iyo mijjo waxay u baahan yihiin in aan la niyad jebin oo la taageero laguna garab galo hawsha ay qaranka u hayaan.
Waxaa iyana saxaafada la mariyaa dhaliilo iyo eedaymo la xidhiidha mashruuca dekedda Berbera ee DP World. Waxaanu halkan ka cadaynayaa in mashruucaasi yahay mid aad u qiimo badan dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca siyaasadaba. Intii aynu heshiiska saxeexnay waxay Somaliland gashay oo caan ka noqotay saxaafadda caalamka. Joornalada caalamaka ugu caansan ayey mid kasta kusoo baxday oo lagu qoray. Mashruucu weli waa bilaw, laakiin isaga oo bilow ah ayuu
dadka ididiilo weyn geliyey oo jawiga maal gashi ee Berbera iyo dalkaba wax badan ka bedelay. Waxay dadku ku dhiiradeen in dalka iyo magaalada Berbera, gaar ahaan maalgashadaan oo dhistaan. Waxaa magaalada ku soo korday dhismayaal badan oo bedeley muuqaalkii Berbera. Wuxa kale oo mashruucu wax weyn ka bedeley maamulka iyo nidaamka shaqo ee dekedda, waxaanu shaqaalaha siiyey xuquuqdoodii shaqaale ee ay xaqqa u lahaayeen sida heshiis (contract), fasax, caafimaad, daryeel. Waxaa iyana mudan in la xuso in wasaaradda maaliyadda uu kasoo galo dekedda dakhli joogto ahi.
Wejiga labaad ee mashruuca oo ah balaadhinta dekedu wuxuu bilaabmayaa sida qorshu yahay bisha Oktobar, insha Allah. Mashruuca DP World iyo heshiiska lala galay si fudud kuma iman, ee waxay ku yimaadeen dadaal iyo juhdi badan oo aanu gelinay, iyada oo wax dheefa oo gaar ahi naga soo gelin. Waxaanu halkan ka cadaynayaa in shilina ha ahaatee wax hantiya oo naga soo gaadhay ama aanu ka filayaa mashruucaas aanu jirin. Waxaanu hawlbadan, hadalxumo iyo hagardaamo badan ugu dulqaadanay annaka oo aaminsan in mashruucaasi wax badan ku soo kordhindoono dhaqaalaheena.
Dadka caadeystey ceebeynta, eedeynta iyo dhiriqaynta muwadiinta u tafoxaydan horumarka, danta guud iyo aqoosiga dalka ee maalkoodii, danahooii iyo waqtigoodiiba u hibeeyey dalka, waxaan leenahay Ilaahay ka yaaba, oo wadanka iyo naftiinaba u tudha.
Axmed Yusuf Cilmi Af-hayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ah Jamhuuriyadda Somaliland